यति सस्तो मूल्यमा क्रेटा लन्च हुने, कति पर्छ मूल्य ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यति सस्तो मूल्यमा क्रेटा लन्च हुने, कति पर्छ मूल्य ?
हुन्डाईको सफल मिडसाइज एसयूभी क्रेटाको मिडलाइफ फेसलिफ्ट परिक्षण भइरहेको खबरहरू सार्वजनिक भएको धेरै भइसकेको । नयाँ क्रेटाको फेसलिफ्ट मोडल साउथ कोरिया र इन्डोनेसीयाको सडकमा परीक्षण भइरहेको स्पाई इमेजहरू मिडियामा बाहिर आएका छन् ।
यही अनुमानलाई पुष्टी गर्दै हुन्डाईले नयाँ क्रेटाको अफिसियल टिजरहरू सार्वजनिक गरको छ । कम्पनीले आगामी नोभेम्बर ११ हुने इन्डोनेसिया अटो शोमा यसको सार्वजनिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।
टिजर इमेजमा देखिए अनुसार नयाँ फेसलिफ्ट क्रेटाको अगाडिको फेसिया पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ । यसको अगाडिको फेस हुन्डाईको नयाँ जेनेरेसन टुसानबाट प्रभावित भएको देखिएको छ । टुसानमा जस्तै फेसलिफ्ट क्रेटामा नयाँ डिजाइनको ग्रिल रहेको छ । जसमा इन्टीग्रेटेड डेटाइम रलिङ लाइट रहेको छ । यसको मुख्य हेडल्याम्प, टर्निङ इन्डिकेटर तथा फगल्याम्प अगाडिको बम्परको तल्लो भागमा सरेको छ ।
नयाँ क्रेटामा दिएको अलोय ह्वील पनि रिडिजाइन गरिएको छ । यसको टेललाइट्स र पछाडिको बम्परमा पनि केही सामान्य परिवर्तन भएको छ । फेसलिफ्ट क्रेटामा थुप्रै नयाँ टेक्नलाजीका फिचरहरू थपिएको अनुमान गरिएको छ । यसमा पहिलादेखि रहेको ७ इन्चको इन्टुमेन्ट क्लस्टर, ८ वटा स्पीकर सहितको बोसको साउण्ड सिस्टम र १०.२५ इन्चको टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम कायमै रहेने छ ।